Magnetic screw tray: isingazivikanwe uye inoshanda chiridzwa | Mahara emahara
Magnetic screw tray: isingazivikanwe uye inoshanda chiridzwa
Zvirokwazvo vazhinji havazive zvachose chiridzwa ichi, sezvo chiri chikuru chisingazivikanwe nevakawanda. Nekudaro, inogona kukubatsira zvakanyanya mumusangano wako kana ukashanda nezvikwiriso zvidiki kana nzungu. Nezvo rinobva sikuruu tireyi haumbofi wakarasa ivo, uye ipapo haufanire kudemba kuti imwe yashaikwa kana uchimisa chirongwa chako.
Zvakajairika kana uchishanda neizvi zvidimbu zvesimbi zvidiki kwazvo kuti vanopedzisira varasika, asi nechiridzwa ichi chinomira kuitika, uye chako fastons, screw, nezvimwe, iwe uchagara uinazvo padhuze ...
1 Chii chinonzi magnetic screw tray?
1.1 Mashandisiro ainoita
2 Kwokutenga magnetic screw tray
Chii chinonzi magnetic screw tray?
Una rinobva tireyi Zvezvikwiriso idenderedzwa, kana mativi tireyi, iyo inowanzo gadzirwa nehurosi husingaite simbi isina simbi. Kutenda kune iyo magineti iyo iyo inosanganisirwa muchitsiko chayo, inochengeta zvese zvidimbu (nzungu, mabhaudhi,…) nemidziyo yesimbi yakasungirirwa kuitira kuti ivo vagare vari kwaunenge uchizvida ivo uye hapana anorasika.
Uye zvakare, ivo anowanzo sanganisira kuchengetedzwa kwe rabha pazasi payo, ipo panogara magineti zvachose, saka haina kutsvedza nyore uye inobata chinzvimbo. Saka unogona kuishandisa pamhando dzese dzekunze, kubva patafura yekumba, kuenda kubhenji rebasa, garaji, nezvimwe.
Kushandisa urwu rudzi rwechishandiso kuri nyore kwazvo. Inogona kushandiswa zvese kune vanogadzira uye kune mamwe akawanda maindasitiri ekushandisa, kusanganisira macomputer ekugadzirisa mashopu uko kuwanda kwesikuru zvidiki zvinoshandiswa mukati disassembly uye gungano yechikwata. Iwe unongofanirwa kuisa tireyi pamusoro, uye wosiya mukati mese zvidimbu zvesimbi zvaunoda kuti zvisarasike.
Saka uchava navo gara uchiona, uye uchavatadzisa kuti varege kuwira pabasa rako kana kurasikirwa. Chinhu chakanyanya kukosha kana zvasvika kune zvekare kana zvakasarudzika zvidimbu izvo zvisisiri kugadzirwa ...
Kwokutenga magnetic screw tray
Kana iwe uchida kutenga iyo zvakachipa magineti tireyi, unogona kutarisa pane izvi zvinokurudzirwa:
Rectangular magnetized tireyi 230x130 mm.
15 cm dhayamita yakasimba magineti ndiro.
150cm dhayamita kutenderera isina simbi tireyi.
Seti yemagineti mbiya gumi nemashanu, gumi nerimwe uye 3 masendimita pakureba.
Magnetic Chishandiswa Bar. Inogona kushandiswa zvese pamusangano, kusimbisa maturusi ako emadziro kumadziro, pamwe nemakicheni, mapanga, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Zvemagetsi zvigadzirwa » Magnetic screw tray: isingazivikanwe uye inoshanda chiridzwa
Micrometer: zvese zvaunoda kuti uzive nezve ichi chishandiso